Ma i tusi kartaa tilmaamaha asaasiga ah iyo xeerarka sharaxaadda alaabta Amazon?
Nasiib darro, ma jiraan xeerar guud ama Amazon sharaxaadda sharaxaadda sheyga oo kuu shaqeyn doona natiijo ballanqaad ah. Waxaan ula jeedaa in khadad kasta oo la taaban karo laga helo internetka waa in la tijaabiyo marka hore, si loo fahmo in ay si fiican u adeegto - ama sida uu yahay, ama laga yaabo inuu u baahan yahay in la hagaajiyo si qaddar ah. Iyo hoosta waxaan rabaa inaan ku siiyo talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan e-ticmushka SEO iyo dhowr ah talooyin wax ku ool ah oo la xiriira Amazon sheyga sharaxaadda sheyga. Rajeynayaan waxay noqon doonaan kuwo faa'iido leh waxayna kaa caawinayaan inaad ku hagaajiso sharaxaada alaabtaada - debt negotiation attorney nj. Ugu dambeyntii, si aad u aragto waxyaabaha aad soo bandhigtay ee ka mid ah heshiisyada ugu sarreeya ee liiska ku qoran ee ku yaala suuqa xorta ah ee aadka u jecel. Qodobbada Sharciga Qodobka Sharciga
Bog kasta oo ka mid ah liisaska wax soo saarka ee Amazon waxaa loogu talagalay inay bixiso sawir weyn oo ah faa'iidooyinka waaweyn iyo muuqaalada sheyga lagu iibiyo (tusaale ahaan, cabbirka, qaabka, qaybaha isticmaalka maalinlaha ah, talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan wixii kale ee la isticmaali karo, iwm.). Inta badan, Shuruucda sharaxaadda alaabta Amazon waxay soo jeedinaysaa dhiirigelinta kuwa iibiya kuwa soo iibiyay liiska alaabooyinka ay ku qoran yihiin cabbirka dhabta ah, macluumaadka damaanad qaadka ah, tilmaamaha dayactirka, iyo sidoo kale codka codka, naxwaha iyo xarakaynta saxda ah. Waxay u egtahay fikradda asalka ah ee Mashruuca Optimization Search (SEO), sax?
Macluumaad kasta oo shirkad gaar ah (xusuus, si kastaba ha ahaatee, in aysan ku saabsan magacaaga caanahaaga - haddii aad ku tilmaanto xitaa sheygaaga sheyga ee ujeedooyinka ujeedada iyo soo dhaweynta si aad u raadineyso calaamad la duubay - waad fiicantahay).
Faahfaahin kasta oo aan khusaynin (sida xogta kuwa kale, shey aan ku xirneyn inaad iibiso halkaa), iyo sidoo kale magaca iibiyaha, URL-yada website-ka, ama cinwaanada e-mail.
Faahfaahinta furfurnaanta ama baaqyada ficilka (tusaale ahaan, wax kasta oo la mid ah "maraakiibta bilaashka ah," "dalab gaar ah," "sale limited", iyo wixii la mid ah).
Talooyinka ugu Fiican ee Loogu Talagalay Meel Gaar ah ee Qodobadaada Xeerka
Dhab ahaantii, liiska dhibcooyinka qoraalka dhab ahaantii waxay u taagan yihiin wakhti gaaban oo ka badan ee sharaxaadda alaabtaada. Xaqiiqdu waxay tahay in rugtu ay noqoto mid sharraxan oo cad oo suurta gal ah. Sidaa daraadeed, tixgeli hababka isticmaalka soo-saarka soo socda si aad u hagaajisid qaybtan sida saxda ah:
Dhibcood kasta waa inuu ku bilaabaa erey muuqaal ah.
Dhamaan lambarada waxaa lagula talinayaa in lagu qoro tirooyin ahaan.
ereyga kala jajabinta adoon dhamaadka xayeysiintu waa ficil fiican.
Xuruuf kasta oo ku jira isla qodobkaas waa in lagu kala soocaa semicolons.
Dhacdooyinka aan ka badnayn shan faa'iidooyinka ugu sarreeya ama qaababka waxsoosaarku waa MUST.
Ku qorida kaliya sifooyinka shey gaar ah waa in mudnaanta la siiyo.
Waraaqo aan caddayn, iyo sidoo kale ujeedooyinka gudbinta, qiimaha, ama macluumaadka maraakiibta laguma talinayo liiska dhibcooyinka xabsiga xaalad kasta.